Newsletter No. 8 Autumn 2019 - The Reward Foundation
Miarahaba! Ny fararano, ny "vanim-potoan'ny zavona sy ny fahavokatra" dia efa eo amintsika. Manantena izahay fa nahavita fahavaratra tsara ianareo ary vonona amin'ny fiatoana vaovao ho avy. Ireto misy fampitam-baovao mafana sy hetsika hetsika fanabeazana manampy anao eny an-dàlana.
Tianay ny manasongadina zavatra roa manokana:
vaovao fohy, animated Video about maninona no fanamarinana taona hametahana sary vetaveta ilaina; ary
hampahafantatra anao momba ny 3 Royal College of General Practitioners (RCGP) -accredited atrikasa amin'ny sary vetaveta amin'ny Internet sy fametavetana tamin'ny Oktobra sy Novambra.
Amin'ireo tranga roa ireo dia manasa anao izahay hanampy anao hanaparitaka ny vaovao amin'ny alàlan'ny Facebook, Twitter na izay haino aman-jery sosialy na fantsona mailaka ampiasainao. Maniry mafy ny hanaitra ny sarimihetsika izahay. Amin'izay fomba izay no ahafahan'ny ray aman-dreny mijery azy sy maneho izany amin'ny zanany, ny mpampianatra dia afaka mizara izany ary mifanakalo hevitra momba ireo fiantraikany amin'ireo mpianatra, ny fahasalamana sy ny matihanina miasa amin'ny asa sosialy dia afaka mampahafantatra ireo mpampiasa ny serivisy sy ny mpanjifany ny antony momba ny fahasalamana sy ny fiarovana ny zaza amin'ity lalàna manan-danja ity izay kasaina. ho fampiharana mandritra ny volana ho avy.
Nahoana no fanamarinana taona?
Atrikasa farany nahazo alalana RCGP
TRF hanangana drafi-pampianarana ho an'ny mpampianatra, Tanora tanora sns.
Fihaonambe iraisam-pirenena fahenina momba ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena ao Japana
Ahoana no andraisan'ny pôrnôgrafia amin'ny fiovan'ny toetr'andro
Ny governemanta UK dia hanome vola mitentina 30 tapitrisa £ hiarovana ireo iharan'ny herisetra ataon'ny ankizy ary hanarahan-dia ireo meloka
Jereo ny torolàlana maimaimpoana nomen'ny ray aman-dreny mavitrika amin'ny sary vetaveta amin'ny Internet
Ity no anay bilaogy miaraka amin'ny horonantsary hanambarana ny rehetra.
Ireo atrikasa malaza sy mora vidy ireto dia miaraka amin'ny vondron'ny tohin'ny fananganana matihanina izay nankatoavin'ny Royal College of General Practitioners. Miala ao amin'ny Killarney 25 izy ireoth Oktobra, Edinburgh amin'ny alarobia 13th Novambra, Glasgow zoma 15th Novambra. Fantaro ny momba ny risika ateraky ny pôrnôgrafia be loatra amin'ny tanora sy ny olon-dehibe amin'ny fahasalamana, ara-dalàna ary ara-tsosialy. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny atiny, ny fandaharam-potoana sy ny vidiny dia jereo Eto.
Taorian'ny taona maromaro niforonan'ny fampianaran'ny mpampianatra, mpampianatra, mpanolo-tsaina, mpanolotsaina fampianarana, ray aman-dreny sy mpianatra dia hanangana andiam-pampianarana lesona ho an'ny mpampianatra sy tanora mpiasa ny TRF amin'ny herinandro ho avy. Hampiditra lesona mifampidirina miaraka amin'ny lohateny toy ny: Sexting sy Brain Adolescent izy ireo; Sexting sy ny lalàna; Pôrnôgrafia sy ianao; sy ny pôrnôgrafia momba ny fitsapana.
Raha ny hifantohan'ireo mpampianatra mpanabe momba ny firaisana dia ny fahazoan-dàlana momba ny fampianarana, izay zava-dehibe, maro ny manampahaizana no manaiky fa tsy ampy mihitsy izany hanampy ny fiatrehana ny vokatry ny tsunami momba ny firaisana ara-nofo matanjaka ho an'ny ankizy ankehitriny, indrindra amin'ny sehatra saro-pady fampandrosoana ara-pananahana. Mivoatra haingana ny pôrnôgrafia amin'ny aretina manandevo.
Mba hijanonana ho smack bang, miaraka amin'ny fampivoarana farany amin'ny fikarohana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet, nanatrika ny TRF ary nanolotra taratasy 2 tamin'ny Fihaonambe fahenina momba ny fitondran-tena ao Yokohama, Japon tamin'ny volana jona tamin'ity taona ity. Nandeha ihany koa ireo fivoriana lehibe momba ny fikarohana farany momba ny pôrnôgrafia amin'ny Internet ary hanoratra famintinana momba izany ho an'ny gazetin'ny fandinihana nataon'ny mpiara-miasa mandritra ny herinandro ho avy. Aretina momba ny fihetsika mamoafady (CSBD), ny fandalinana vaovao amin'ny fanavaozana farany an'ny World Health Organization momba azy Fandaharana iraisam-pirenena momba ny aretina (ICD-11) dia noresahina tsara. Ilaina ny mahafantatra fa mihoatra ny 80% ny olona mitady fitsaboana ho an'ny CSBD dia manana olana mifandraika amin'ny pôrnôgrafia fa olana iray amin'ny fiankinan-doha amin'ny firaisana ara-nofo toy ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa marobe na matetika ny mpivaro-tena.
Indostrian'ny sehatra lehibe ny pôrnôgrafia. Mpamatsy mpamatsy iray dia mandefa horonan-tsary mamoafady avo lenta 110 tapitrisa isan'andro. Midika izany fa mampiasa angovo be dia be izy io. Jereo ity fampianarana vaovao lehibe nataon'ny vondrona frantsay ity amin'ny hoe firy amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet no mandray anjara amin'ny CO2 fivoahana sy ny fiovan'ny toetr'andro. Ny pôrnôgrafia dia manome 0.2% amin'ny fivoahan'ny entona maintso rehetra. Ho an'ny sakan'ny haavon'ny ranomasina dia miakatra 2 milimetatra ny pôrnôgrafia. Miteraka fahapotehina manerana izao tontolo izao ny pôrnôgrafia!
Matetika dia adino ny hoe ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet no mandray anjara amin'ny firongatry ny fanararaotana ara-nofo amin'ny zaza. Tsara raha omena vola ity fanampiana ity mba hanampiana amin'ny fisorohana sy hanabeazana ny vahoaka momba ny loza ateraky ny fidirana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet rehetra sy ny loza ateraky ny fisondrotana. Zahao ny tantara feno Eto.
Fandrosoana, lamina ary fihetsika manimba ny sary vetaveta ao amin'ny oniversite poloney: fizahana iray fizarana (2019)
Ny fandalinana lehibe any Polonina (n = 6,463) momba ny mpianatra lahy sy vavy (taona mediana 22) dia mitatitra fa avo lenta ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia (15%), ny fiakaran'ny fampiasana pôrnôgrafia (fandeferana), ny soritr'aretina fisintahana ary ny firaisana ara-nofo sy firaisana ara-nofo mifandraika amin'ny pôrnôgrafia olana.
Ireo singa mifandraika:
Ny fampiasana sary vetaveta mahatsikaiky indrindra dia nampidirina: ny filàna fanentanana maharitra (12.0%) sy ny fanentanana ara-nofo bebe kokoa (17.6%) mba hahatongavana amin'ny orgasme, ary ny fihenan'ny fahafaham-po amin'ny firaisana ara-nofo (24.5%).
Ny fandinihana ankehitriny dia nanolo-kevitra ihany koa fa ny fiparitahana teo aloha dia mety misy ifandraisany amin'ny fampihenana ny filàna ara-pananahana araka ny fanaporofoana ny filàna famporisihana lava kokoa ary ny fanentanana ara-nofo bebe kokoa ilaina hahatratrarana ny orgasme rehefa mihinana fanazavana mazava, ary ny fihenan'ny fahafaham-po amin'ny firaisana ara-nofo....
Ny fanovana isan-karazany momba ny fampiasana pôrnôgrafia mitranga amin'ny vanim-potoana fitrandrahana dia voalaza: nitodika taminà karazan-dahatsoratra vaovao momba ny loko (46.0%), fampiasana fitaovana tsy mifanaraka amin'ny fironana ara-pananahana (60.9%) ary mila mampiasa bebe kokoa fitaovana matavy (mahery setra) (32.0%).
Jereo ny fanavaozana ataontsika TORO LALAN'NY MPIANATRA ARA-BAIBOLY
Copyright © 2019 Ny Valisoa Fananana, Zo rehetra voatokana.